Seychelles dia mandeha amin'ny dizitaly eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery italiana miaraka amina fampielezan-kevitra kendrena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles dia mandeha amin'ny dizitaly eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery italiana miaraka amina fampielezan-kevitra kendrena
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny biraon'ny solontenan'ny fizahantany Seychelles any Italia miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny marketing Qatar Airways dia nandefa fampielezan-kevitra ho an'ny mpanjifa izay mizara fizarana roa tena manan-danja sy mitombo ho an'ilay toerana - honeymoons sy ecotourism.
Seychelles dia misongadina ao amin'ny vavahady fampakaram-bady italiana Matrimonio.com.
Mirehareha ny mpivarotra 700,000+, mpampiasa tsy manam-paharoa 20 tapitrisa ary hevitra 7 tapitrisa.
Izy io koa dia mpitarika amin'ny fantsona media sosialy misy mpankafy 8,100,000 mahery ao amin'ny Facebook, mpanaraka maherin'ny 3,950,000 ao amin'ny Instagram ary mpanaraka 2,000,000 ao amin'ny Pinterest ary voalohany amin'ny valin'ny Search Engine Marketing sy Search Engine Optimization.
Ny mpivady mikendry ny hanambady amin'ny vanim-potoanan'ny mariazy manaraka, taorian'ny fanafoanana ny fandraràna ny lanonana fampakaram-bady ny volana jona 2021 nataon'ny governemanta italianina, Seychelles no asongadin'ny vavahady fampakaram-bady italianina lehibe Matrimonio.com.
Mpitondra manerantany momba ny drafitra fampakaram-bady an-tserasera miaraka amin'ny fizarana 96% amin'ny fanambadiana 195,000 natao isan-taona tany Italia ary miasa amina tsena 12 manerantany, ity vavahady fampakaram-bady ity no loharano manan-danja indrindra ho an'ireo mpivady mikarakara ny fampakaram-badin'izy ireo ary manasongadina ny fikarohana rehetra mifandraika amin'ny fampakaram-bady, toy izany toy ny akanjo, toerana, voninkazo ary toho-tantely. Ny iraka ampanaovina azy ireo dia ny fanampiana ireo mpivady efa nanambady hanomana ny mariaziny amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy ireo amin'ireo mpamatsy ambony ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Mirehareha ny mpivarotra 700,000+, mpampiasa tsy manam-paharoa 20 tapitrisa ary hevitra 7 tapitrisa. Izy io koa dia mpitarika amin'ny fantsona media sosialy misy mpankafy 8,100,000 mahery ao amin'ny Facebook, mpanaraka maherin'ny 3,950,000 ao amin'ny Instagram ary mpanaraka 2,000,000 ao amin'ny Pinterest ary voalohany amin'ny valin'ny Search Engine Marketing sy Search Engine Optimization.
Ny tetik'asa, miaraka amin'ny marketing miaraka amin'ny Qatar Airways, dia misy fampielezan-kevitra mihetsika roa, amin'ny alàlan'ny seho birao sy finday, dokambarotra ary ny fijerena haino aman-jery sosialy, hanome aingam-panahy ny mpivady handrafitra ny Volana tantely Seychelles miaraka amina fonosana fialan-tsasatra. Manomboka amin'ny volana Jona 2021, ny fampielezan-kevitra dia manankarena amin'ny dingana faharoa amin'ny fanentanana sy famerenana amin'ny laoniny fampielezam-peo, ary gazety iray manokana ho an'ny tahiry manontolo momba ny mpanambady 190,000 amin'ny ho avy.
Seychelles fizahan-tany matoky izy fa ny fampielezan-kevitra dia hanome aingam-panahy ny ampahan'ny volan-tantely, izay natory noho ny areti-mifindra COVID-19 hatramin'ny taona lasa fa Seychelles no fialantsasatra tonga lafatra ho an'ny mpivady mitady fiarovana, fifandraisana akaiky ary paradisa tropikaly tsy voakitika.
Ankoatr'izay, ny fizahan-tany Seychelles dia mizaha sehatra lehibe hafa manan-danja izay mitombo amin'ny hafainganam-pandeha haingana - ny tontolo iainana.
Ny tanjona amin'izany dia ny hanome aingam-panahy ny mpandeha vaovao, izay mahatsapa ny olana maharitra sy mitady toerana madio sy marina toa an'i Seychelles, miaraka amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary sy ny fijerena ny fiarovana azy, ny Seychelles dia hasongadina mandritra ny volana ho avy amin'ny natiora italiana malaza. magazine La Rivista della Natura sy ireo fantsona media sosialy sy sosialy.
Natura, famoahana isan-telovolana, mirehareha amin'ny mpamaky 20,000 1999, ary koa ny fisian'ny Internet an-tserasera miaraka amin'ny tranokala ofisialiny sy ny fantsona media sosialy dia nanjary lohahevitra momba ny natiora sy ny tontolo iainana nanomboka ny taona XNUMX. Fantatra amin'ny sary avo lenta sy ny atiny mahaliana, navoaka lahatsoratra vitsivitsy isaky ny fanontana isaky ny telo volana no nosoniavin'ny manam-pahaizana lehibe momba ny natiora sy ny tontolo iainana. Ny Rivista della Natura dia zaraina ihany koa mandritra ny hetsika sy fampirantiana maro. Ny fanontana tsirairay dia manome soso-kevitra momba ny làlan'ny natiora sy ny dia mankany amin'ny toerana misy ny firenena sy iraisam-pirenena miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny dia maharitra, toerana dia, biby ary zavamaniry.
Ny fanontana tsirairay dia misy sisiny "EKONOMIANA" - mandrakotra olana toy ny etika, tsena, dia maharitra - natokana ho an'ny fifandraisan'ny zanak'olombelona sy ny tontolo iainana, fa ny fizarana sasany kosa dia mifantoka amin'ny soso-kevitra momba ny fitondran-tena amin'ny fiainana andavanandro sy ny fomba fanao tsara ho an'ny mpamaky. mitahiry ny tany amin'ny fahalotoan-tsaina, raha toa kosa ny sehatra an-tserasera manolotra taratasim-baovao natokana sy atiny manokana.
Ny fampielezan-kevitry ny mpanjifa dia misy lahatsoratra natokana ho an'i Seychelles, pejy fanaovana dokambarotra, takelaka misy tohana ary sora-baventy manokana hitan'ny mpampiasa 1,712,360 isan-taona.
Tamin'ny taona 2019, nahazo mpitsidika 27,289 XNUMX avy any Italia i Seychelles.